Itoobiya oo ku jirta Qalalaase Siyassada ee Juqraafiyeed – Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Home › Forums › Madasha Dhalinyarada › Itoobiya oo ku jirta Qalalaase Siyassada ee Juqraafiyeed
June 15, 2022 at 8:43 am #4191 Reply
Qormadan, waxaan ku doodayaa in Itoobiya ay hadda ku jirto xiisad juqraafiyeed oo ay hoos u dhacday xiriirkeeda juquraafi ahaaneed. Waxaan u isticmaalaa ereyga jaho-siyaasadeed si aan u qabsado ujeeddooyinka siyaasad-dhaqaale ee gudaha iyo dibaddaba. Dhaqdhaqaaqa gudaha iyo dibaddaba ayaa sababay oo uga sii daray xiisadda juqraafiga ah. Qalalaasaha siyaasadeed ee ka bilaabmay iska caabin dadweyne oo lagaga soo horjeeday xukuumaddii EPRDF ay hoggaanka u haysay, waxa daba socday isbeddel rajo leh. Si kastaba ha ahaatee, farxaddii ayaa isu rogtay rajo la’aan ka dib qalalaasihii EPRDF oo ay laba u kala jabeen. Dagaaladii u dhexeeyay dawladda Itoobiya iyo kooxda TPLF ayaa dalka halakeeyay, waxayna dhaawacday xidhiidhkii dibadda.
Dhaqdhaqaaqa siyaasad-dhaqaale ee gudaha ayaa soo bandhigay qaabab isku mid ah taas oo ka dhalatay xiisadda siyaasadeed. Muddooyinkii u dambeeyay dalka waxa si weyn u galay qalalaase siyaasadeed iyo mid dhaqan-dhaqaale. Shaqo la’aanta oo ay weheliso sicir-bararka cirka isku shareeray ayaa nolosha iyo dhaqaalaha dadka sii adkeeyay. Dalka waxa soo foodsaaray lacag yari baahsan.
Tartan Siyassada ee Juqraafiyeed ee caalamiga ah iyo khalkhalka caalamiga ah ayaa gacan ka gaystay qalalaasaha Siyassada ee juqraafiyedeed ee Itoobiya. Maraykanka iyo hay’adaha caalamiga ah ee xidhiidhka la leh ayaa cadaadis iyo cunaqabatayn saarayay Itoobiya muddadii ay maamulayeen Trump iyo Biden. Waxaa intaa dheer, maqnaanshaha deymaha Shiinaha ee Itoobiya, xafiiltanka juqraafiyeda gobolka, cudurka faafa ee coronavirus, iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa gacan ka geystay xiisadda juqraafiyeed ee Itoobiya ay wajahayso hadda. Qodob kasta oo ka qayb qaatay qalalaasahan hoos ayaa lagaga hadlay.
Qalalaasaha GERD (Wabiga Abay) iyo Cadaadiska Dibadda ee daba socda
Markii uu ra’iisul wasaare Abiy Axmed la wareegay talada 2018, dowladda Itoobiya waxay bilawday qorshe cusub. Maamulka cusub ayaa soo jeediyay qorshaha ‘Dib-u-habaynta Dhaqaalaha Gudaha’ si dhaqaalaha Itoobiya wax looga beddelo.
Mareykanka iyo hay’adaha maaliyadeed ee caalamiga ah sida Bangiga Adduunka iyo IMF ayaa ballan qaaday inay taageerayaan qorshaha dib u habeynta. IMF ayaa 2.9 bilyan oo dollar ugu yaboohday Itoobiya in lagu bixiyo saddex sano gudahood. Bangiga Adduunka ayaa ku dhawaaqay inuu 500 milyan oo dollar ku taageerayo qorshaha dib u habeynta. Maraykanku waxa uu sheegay in uu ku celin doono barnaamijka dib u habaynta shan bilyan oo doolar oo maalgashi saddex ilaa shan sano gudahood.
Ka dib, ballanqaadyadaas waa laga tagay. Baanka Adduunka ayaa isla markiiba hakiyay 500 milyan oo doolar oo uu u ballan qaaday Itoobiya si ay u noqoto taageero dhaqaale oo degdeg ah ka dib markii ay Itoobiya bilawday wareegii koowaad ee buuxinta biyaha June 2020.
Maamulka Trump ayaa ku soo rogay Itoobiya in laga jaro gargaarka sabab la xidhiidha khilaafka Abay ee Masar iyo Suudaan. Mareykanka iyo Bangiga Adduunka ayaa soo farageliyay si ay u dhexdhexaadiyaan khilaafka. Si kastaba ha ahaatee, dhexdhexaadintu waxay ahayd xukun aan xaqiiq ahayn sida laga arkay mawqifka qaybeed ee dawladda Maraykanku ka qaadatay siyaasadda Wabiga Abay ee u xaglinaysa Masar. Dowladda Mareykanka ayaa uga digtay Itoobiya in aysan bilaabin buuxinta biyo xireenka ka hor inta aysan heshiis la galin Masar iyo Suudaan. Baanka Adduunka ayaa sidoo kale cadaadis ku saarayay Itoobiya intii ay dhexdhexaadintu socotay si Itoobiya ay ula heshiiso Masar iyo Suudaan.
Dhowr toddobaad ka dib, waxaa la sheegay in Baanka Adduunka uu sidoo kale hakiyay 2.9 bilyan oo doollar oo uu u ballan qaaday in uu ku siinayo Itoobiya ‘Qorshaha Dib-u-habaynta Dhaqaalaha Gudaha’. Baanka ayaa ugu horeyn ballan qaaday inuu daboolayo 60% (10 bilyan) oo doollar oo dhaqaale ah oo loo baahan yahay si loogu fuliyo qorshaha dib-u-habaynta saddexda sano.
Hay’adda IMF ayaa hakisay lacagihii balaayiinta doolar ahaa ee ay siin jirtay Itoobiya. Dalka waxa laga hor istaagay in uu deeqo iyo deymo ka helo hay’adaha caalamiga ah ee maaliyadda.
Maaddaama Masar ay xulufo juqraafiyeed oo dhow la leedahay Mareykanka, waxay soo abaabuli kartaa taageerada Mareykanka iyo Jaamacadda Carabta oo ka dhan ah Itoobiya oo ku saabsan xafiiltanka juqraafiyeed ee Niilka.
Diga Rogashada Maraykanka ee Indho-basifiga iyo Dhaqdhaqaaqa Gudaha ee Maraykanka
Tan iyo WWII, Bariga Dhexe iyo gobolka Badda Cas waxay ahaayeen juquraafi-istaraatijiyad muhiim u ah Maraykanka. Maraykanku wuxuu diiradda saaray gobolka wuxuuna Itoobiya ka dhigay mid juqraafi ahaan muhiim u ah Maraykanka.
Itoobiyaxiligii Xayle Salaase waxay ahayd xulufo aad ugu dhow oo kaalmo badan ka hesha Maraykanka, sababo la xidhiidha juquraafi ahaan, siyaasad ahaan, iyo danaha Maraykanka ee Badda Cas.
Itobiya xiligii EPRDF waxay sidoo kale ahayd saaxiibka muhiimka ah ee Maraykanka kadib weerarkii 9/11 iyo ka dib ololihii la dagaalanka argagixisada. Nidaamku wuxuu ahaa saaxiibka dhow ee Geeska Afrika ee ka hortagga Al-Shabaab iyo dhaqdhaqaaqyada xagjirka ah.
Dhaqan ahaan, Bariga Dhexe, Yurub, iyo Bariga Aasiya waxay ahaayeen mudnaanta koowaad ee Ameerika siday u kala horreeyaan. Hadda, Bariga Dhexe waa mudnaanta juquraafi ahaaneed ee Maraykanka iyo kuwa kale. Isbeddellada juqraafiyedeed ee gudaha awgeed, diiradda Maraykanka ee gobolka Badda Cas ayaa hoos u dhacay.
Maraykanku hadda waxa uu ku dhow yahay in uu noqdo mid ka madax bannaan, mana jirto sabab uu diiradda u saaro gobolka Badda Cas. Maamullada Maraykanku waa inay diiradda saaraan gudaha sababtoo ah kor u kaca kala qaybsanaanta dhaqan-dhaqaale iyo qalalaasaha ka dhex jira bulshada Maraykanka. Maamulka Biden ayaa arrintaas ku bixiyay trillion dollar.
Maraykanku hadda kuma sii foogana dagaalka ka dhanka ah ololayaasha argagixisada iyo guud ahaan Geeska Afrika. Danta ugu weyn ee juquraafi-siyaasadeed ee Maraykanku hadda waa in la xakameeyo fiditaanka Shiinaha ee gobolka Indo-Pacific.
Muhiimadda juqraafiyeed ee Itoobiya ay u leedahay Mareykanka ayaa had iyo jeer ku xidhan danaha juqraafiyeed ee Mareykanka ee Bariga Dhexe. Laakin hadda Mareykanku waxa uu ka baxayaa bariga dhexe si uu xoogga u saaro Shiinaha.
Firfircoonaantan ayaa si weyn wax ugu biirisay qalalaasa juqraafiyeedka siyaasadeed ee Itoobiya taasoo ka dhigtay in waddanku aanu hadda muhiim u ahayn Maraykanka.
Hoos u dhaca deymihii Shiinaha ee Itoobiya
Amaahda Shiinuhu waxay ka danbeeyeen kobaca dhaqaale ee dhaqaalaha Itoobiya. Itoobiya waxaa lagu leeyahay in ka badan 30 bilyan oo dayn dibadda ah, waxaana ku dhawaad ​​14 bilyan oo dollar ku lehShiinaha.
Tanaasulka Shiinaha ee Ururka Ganacsiga Adduunka iyo dakhligiisa faraha badan ee forex ga ayaa sidoo kale fursad weyn u furay xukuumadda EPRDF inay ku raaxaysato helitaanka dhaqaale iyo kicinta dhaqaalaha.
Amaahda heshiisyada Shiinaha ayaan hadda la heli karin maadaama Itoobiya ay ku guuldareysatay inay si hufan u isticmaasho dhaqaalaha Shiinaha ee tirada badan.
Shiinaha ayaa sidoo kale Itoobiya ka mamnuucay in ay dayn ka hesho bangiyada. Dhawaan Bangiga dhoofinta iyo soo dejinta (EXIM) ee Shiinaha ayaa joojiyay bixinta deyn dhan 339 milyan oo dollar taasoo keentay in la joojiyo dhismaha 12 mashruuc oo waaweyn oo kaabayaasha dhaqaalaha ah.
Itoobiya waxa ay wayday deymaha Shiinaha ee lays dhaafsan jiraysababtoo ah Itoobiya ma awoodo in ay iska bixiso deymihii lagu lahaa wayna ku guul darreysatay in ay bixiso deymahaa. Sidoo kale waxaa sabab u ah Belt and Road Initiative (BRI) oo dalbanaysa lacag aad u badan. Tani waxay door muhiim ah ka ciyaartay qalalaasaha juqraafiyeed ee Itoobiya iyo hoos u dhaca juqraafi-dhaqaale.
Faafida Coronavirus iyo Dagaalkii Ukraine iyo Ruushka
Dillaacida cudurka faafa ee coronavirus iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa ahaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhaawacay dhaqaalaha Itoobiya. Faafida ayaa burburisay waaxihii ganacsiga iyo saadka. Warbixinadu waxay saadaalinayaan in waddanku lumin karo 4.3 boqolkiiba ilaa 5.5 boqolkiiba GDP-ga masiibada dartiis.
Tani waxay burburisay matoorka dhaqaalaha oo ah qaybta dhismaha. Waxay keentay Sicir barar aad u xun.
Dhibaatada waxaa sii xumeeyay dagaalkii dhawaan dhexmaray Ruushka iyo Ukraine. Dagaalku waxa uu horeba uga sii daray cunno yarida iyo cuntada dalka la soo galiyo.
Arrimahan ayaa sabab u noqday hoos u dhaca lacagta qalaad oo si weyn u dhaawacday dhaqaalaha Itoobiya. Todobaadyo ka hor, waxaa la sheegay in dalka uu haysto lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar oo kaliya oo ah kaydka sarifka lacagaha qalaad oo u dhiganta bil iyo saddex toddobaad oo dibadda ah.
Loolanka Siyaasadeed ee Gobolka iyo Nuglaanta Itoobiya
Waxaa beryahan dambe ka socday gobolka ay Itoobiya ku taallo tartamo siyaasadeed oo heer gobol ah. Maaddaama Maraykanku uu ka baxayo gobolka, quwadaha Bariga Dhexe sida Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Iran, iyo Turkiga ayaa ku lug lahaa gobolka si ay u ballaariyaan saameyntooda juqraafiyedeed.
Geeska Afrika iyo siyaasadda Juquraafiga Itoobiya waxay la xidhiidhaan oo inta badan saamayn ku leh qulqulka juqraafiyeed ee Bariga Dhexe.
Itobiya waxa saamayn togan iyo mid tabanba ku yeelan kara tartankan badda cas oo ay Sucuudiga, Imaaraadka, iyo Masar hal dhinac yihiin, Iran iyo Turkiguna dhinac kale yihiin. Sacuudiga, Imaaraadka, Turkiga, iyo Iran ayaa ku tartamaya Itoobiya. Dhammaan awoodahaas oo dano-siyaasadeed oo kala duwan ka leh dalka waxay ku taageerayaan dawladda federaalka dagaalka ay kula jirto kooxda TPLF.
Maadaama ay danahoodu kala duwan yahiin, tartankan juquraafi-siyaasadeed ayaa laga yaabaa inuu saameyn xun ku yeesho Itoobiya oo uu sii kordhiyo xiisadda juqraafiga.
Tusaale ahaan, Turkigu waxa uu la tartamayaa Masar waxana laga yaabaa in uu u adeegsado Itoobiya si uu uga hor tago ammaanka biyaha Niilka ee Masar. Imaaraatka Carabta ayaa leh saamiga ugu badan ee dekedda Somaliland waxaana laga yaabaa in Itoobiya ay u adeegsato sidii ay uga tagi lahayd dekedda Jabuuti. Eritrea iyo Jabuuti waa col. Isku soo dhawaanshiyaha Eritrea oo ay weheliso suurtagalnimada in lagala wareego DP Port waxa ay dhaawici kartaa xidhiidhka Itoobiya iyo Jabuuti.
Isbeddelka taliskii 2019 ee Suudaan iyo soo dhisidda dawlad taageersan Masar ayaa sidoo kale ahaa isbeddel juqraafiyedeed weyn oo Itoobiya si xun u saameeyay. Suudaan iyo Itoobiya ayaa tan iyo muddooyinkan dambe waxa u dhexeeyey khilaaf ku saabsan wabiga Abay iyo dhul. Tani waxay Masar u furtay fursad ay ku xoojiso dagaalka juqraafiyedeed ee ay kula jirto Itoobiya gaar ahaan wabiga Abay.
Iska hor–imaad hubaysan iyo xasilooni darro
Iskahorimaadyada hubaysan iyo xasillooni-darrada waxay leeyihiin laba tusaale, saameyn gudaha iyo mid dibadda ah. Waxay sii xumeeyeen xasaradaha gudaha waxayna dhaawaceen xiriirkii dalka uu la lahaa caalamka dibadda.
Dagaalku waxa uu xumeeyay xidhiidhka Itoobiya iyo reer galbeedka iyo hay’adaha caalamiga ah.
Midowga Yurub ayaa dhamaadkii sanadka 2020-ka jaray 109 milyan oo dollar oo taageero miisaaniyadeed ah oo uu siin jiray Itoobiya.
Maamulka Biden ayaa sii waday cunaqabataynta halka dhinac ah ee uu ku soo rogay Trump isaga oo dib ugu xidhay iskahorimaadka hubaysan ee Tigray. Maraykanku waxa uu Itoobiya ka gooyay cashuur-la’aantii AGOA.
Dhaqaale la’aantan ka imanaysa reer galbeedka iyo hay’adaha caalamiga ah waxay kicisay xasarado dhaqan-dhaqaale.
Isku dhacyada hubaysan iyo xasilooni darada ayaa sidoo kale dalka ka dhigay mid u nugul loolan jahada-siyaasadeed iyo xasaradaha. Isku dhacyada gaar ahaan dagaalka u dhexeeya kooxda TPLF iyo dawladda federaalka ayaa sii xumeeyay siyaasad la’aanta iyo qalalaasaha Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee, xidhiidhkii u dhexeeyay dhaqdhaqaaqyada dibadda iyo arrimaha gudaha ayaa Itoobiya ku milmay qalalaase siyaasdeed. Sidaa darteed, jahada siyaasadeed ee Itoobiya ayaa si weyn hoos ugu dhacday.
Itoobiya waa inay aqoonsato welwelka jahada siyaasadeed ee Mareykanka iyo Masar ee ku aaddan webiga Niil. Dowladda Itoobiya waa in ay heshiis ka gaadho buxinta biyo xidheenka.
Waa in la soo afjaraa iskahorimaadyada hubaysan oo ay ku jiraan dagaalka iyo xasillooni darrada ka jirta dalka oo dhan.
Dalku waa inuu isku dheelitiraa xidhiidhkiisa si uu u maareeyo saameynta ba’an ee ka dhalan karta tartanka juqraafiyedeed ee gobolka ee quwadaha Bariga Dhexe.
Itoobiya waa in ay hagaajiso xidhiidhka ay la leedahay reer galbeedka maadaama taageeradoodu ay muhiim tahay. Dadaal diblomaasiyadeed oo xog-ogaal iyo xirfad leh waa in la sameeyaa.
*Hagos Gebreamlak waa wariye ka tirsan Inform Africa.
Reply To: Itoobiya oo ku jirta Qalalaase Siyassada ee Juqraafiyeed